I-MIT ikholelwa ekubeni i-fusion yenyukliya inokulunga kwiminyaka eyi-15 kuphela | Iindaba zeGajethi
Ayiloxesha lokuqala ukuba iActualidadGadget ithethe ngesihloko esibalulekileyo ebantwini njengoko fusion yenyukliya. Ngaphambi kokuba uqhubeke, khumbuza ukuba i-fusion yenyukliya yinto esingenakho ukufikelela kuyo okoko, ngokuchasene noko siqhele ukukuqhelanisa, okwenziwa zizityalo zamandla enyukliya namhlanje kukuqhekeka kwenyukliya, Oko kukuthi, endaweni yokujoyina iiathom ezimbini (ukudibanisa) into abayenzayo yahlula-hlula ngambini (fission).
Nje ukuba oku kucace gca nangakumbi, nangona kwinkcazo sishiye iindlela ezininzi zokuchukumisa ukuqonda ukuqonda umahluko phakathi kwengcinga enye nenye, namhlanje ndifuna sithethe ngoxwebhu lwamva nje olubhekisa kulo mcimbi epapashwe liqela leenjineli kunye nabaphandi abavela mit, abathi baqinisekise umbulelo kukufumanisa kwabo inokunciphisa kakhulu amaxesha ophuhliso ukuze ulawulo lwe-fusion yenyukliya lube yinto yokwenene.
1 Iqela leenjineli ze-MIT zikholelwa ukuba bayifumene indlela yokunciphisa ixesha elifunekayo kuphuhliso lwe-fusion yenyukliya ngesiqingatha
2 Enkosi kwi-superconductor entsha siza kukwazi ukuvelisa oomazibuthe abanamandla ngakumbi nabanamandla okwakha isixhobo sombane ukuya kuthi ga kuma-65 amancinci kunalawo akhoyo ngoku.
3 Ukuhlanganiswa kwenyukliya kufuneka kusombulule zonke iingxaki zamandla eziphambili ezifunwa ngabantu namhlanje
Iqela leenjineli ze-MIT zikholelwa ukuba bayifumene indlela yokunciphisa ixesha elifunekayo kuphuhliso lwe-fusion yenyukliya ngesiqingatha
Ukuze uqonde ukuba umba wokudibana kwenyukliya unjani namhlanje, xelela ukuba namhlanje zintathu iindlela ezinokubakho zokuqinisekisa ukuba abantu banokuzonwabela zonke izibonelelo zamandla ezithembiswa kukudityaniswa kwenyukliya. Ezi ndlela zintathu zidlula kwi-ITER, i-IFMIF DONES okanye iiprojekthi ze-DEMO, ezifanayo amaqela azo aphambili aqinisekisa ukuba, ubuncinci kude kube sisiqingatha senkulungwane, abayi kuwugqiba umsebenzi wabo, ngenxa yoko sithetha, nokuba kungaphezulu okanye ngaphantsi, kokulinda inokuhlala ngaphezulu kweminyaka engama-30.
Enkosi ngokufumanisa okwenziwe yi-MIT, kubonakala ngathi le mihla ibekiweyo inokuncitshiswa ngesiqingatha. Njengeenkcukacha, yazisa ukuba olu phononongo lwenziwe ngokudibeneyo kunye nabaphandi abavela kwiiNkqubo zeCommonwealth Fusion Systems, inkampani yabucala ekhethekileyo ekuhlanganisweni kwenyukliya. Emsebenzini siboniswa ngefayile ye- superconductor entsha enokusetyenziselwa ukwenziwa kwe- Isizukulwane esitsha esinamandla ngakumbi kunye nesimagnethi esincinci kuleyo ngoku isetyenziswa zizibuyisi ezimbalwa zenyukliya esele zakhiwe okanye ezingaphumeleliyo, ziyakhiwa.
Enkosi kwi-superconductor entsha siza kukwazi ukuvelisa oomazibuthe abanamandla ngakumbi nabanamandla okwakha isixhobo sombane ukuya kuthi ga kuma-65 amancinci kunalawo akhoyo ngoku.
Ngokuphathelele kwindima yemagnethi kwi-fusion yenyukliya, xelela ukuba badlala indima ebaluleke kakhulu ukusukela banoxanduva lokuvala iplasma, into engekho ngaphezu kwegesi enokufikelela kwiqondo lokushisa elikufutshane namakhulu amabini ezigidi ze-degrees Celsius. Le gesi inoxanduva lokudibanisa i-deuterium kunye ne-tritium nuclei, ngaloo ndlela ivelise i-helium nucleus enye kunye ne-neutron ephezulu yamandla.
Omnye wemisebenzi emikhulu eyenziwe ngoomazibuthe kolu hlobo lwezixhobo zokuphendula kuku ukuvelisa uxinzelelo olwaneleyo phakathi kwe-deuterium kunye ne-tritium nuclei ukuze, ngoncedo lobushushu obuphezulu beplasma, zombini zixutywe. Okwangoku, oososayensi ababandakanyekayo kuphuhliso lwale projekthi baqinisekisa ukuba ukwenziwa kwale superconductor kuya kubavumela ukuba benze oomazibuthe ngakumbi abanamandla, abanokuthi baguqulele ekufezekiseni oko ubungakanani be-reactor bancitshiswa malunga namaxesha angama-65.
Ukuhlanganiswa kwenyukliya kufuneka kusombulule zonke iingxaki zamandla eziphambili ezifunwa ngabantu namhlanje
Ukuvavanya ukwenzeka kweprojekthi, iinjineli sele zilungiselele ukusebenza kulwakhiwo lwezixhobo ezitsha zokudibanisa izixhobo, ezibhaptiziweyo ngegama le I-SPARC kwaye, ngokweziketshi zokuqala, njengoko kubonisiwe, izakubangama-65 amancinci kuno-ITER.
Inqaku elinye elincoma ukusetyenziswa kwesi sizukulwana sitsha semagnethi kukuba, ekubeni zinamandla ngakumbi, ii-cores zeplasma zinokufakwa koxinzelelo oluphezulu kakhulu, oluthi emva koko luguqulele bekungayi kuba yimfuneko ukuba iplasma ifikelele kubushushu obugqithisileyo. Ngaphantsi kwezi meko zichaziweyo, amandla ombane kufuneka abe phezulu, Oko kukuthi, Kwiyunithi nganye yamandla afunekayo ukwenza uhlanganiso siya kufumana iiyunithi ezimbini zamandla anokusebenziseka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » I-MIT ikholelwa ekubeni i-fusion yenyukliya inokulunga kwiminyaka eyi-15 kuphela
I-ESA ivavanya ngempumelelo indawo entsha yokubaleka ebaleka yomoya wedwa